संसद किन उठ्यो जोन अफ केनेडी, फिडेल क्यास्ट्रो र महेन्द्रको प्रसंग ?
काठमाडौं – विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तुलना इतिहासमा रहेका विदेशी नेताहरूको छविसँग गरेका छन् ।
नेता रिजालले संसदमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जोन अफ केनेडी, क्युवाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो, सोभियत संघको नेतृत्व गरेका निकिता खुस्चेव तथा पूर्वराजा महेन्द्र अनि ज्ञानेन्द्रको नाम लिएका छन् ।
‘सन् १९६१ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति केनेडीले संसदको संयुक्त बैठक राखेर दशक नबित्दै चन्द्रमामा मान्छे पुर्‍याएर जीवित ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखे । केनेडीले प्रस्ताव राखेको दशक नबित्दै सन् १९६९ मा नील आरमस्टङले चन्द्रमा आफ्नो खुट्टा राख्छन् । चन्द्रमामा पाइला राखेका नीलले भने एउटा व्यक्तिका लागि एक पाइला मात्र हो तर मानव सभ्यताका लागि यो विशाल छलाङ भयो,’ रिजालले संसदमा भने ।
सोही समयमा क्युवामा फिडेल क्यास्टो र सोभियत संघमा निकिता खुच्चेव नेतृत्वमा थिए । ‘२४ मध्ये ११ वटा टाइमजोन भएको सोभियत संघ अहिले इतिहासको पन्नामा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘निकिता खुस्चेवले लिएको बाटोका कारण र क्यास्टोको बाटो छाडेर मात्र अहिले क्युवा हिँड्न सकेको छ । त्यहीबेला हामीकहाँ बीपी कोइरालालाई महेन्द्रले विना कारण ८ वर्ष जेल राखे । बीपीले भनेको बाटोमा हिँडदै जाँदा आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेका छौं । महेन्द्रको बाटोबाट पञ्चायत कहाँ पुग्यो ?’
यी उदाहरण पेश गरेर रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले केही काम गर्न सक्दैनौ भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुर्‍याउँछ । २५ अर्बभन्दा ठूला आयोजना प्रधानमन्त्रीको निर्देशक समितिले गर्ने भनेपछि अर्थ मन्त्रालयको काम के हुन्छ ? अधिकारको केन्द्रीकरणले सोभियत युनियन, फिडेल क्यास्टोको देशले अर्को बाटो समात्यो । माओत्सेतुङको देशले देग सिआयो पिङपछि बाटो फेरेर अहिले उदीयमान अर्थतन्त्र भयो,’ रिजालले भने ।
प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लेर जनताको चुलोमा ग्यासको पाइपलाइन पुर्‍याउने र स्टिमर होइन ठूला पानीजहाज चलाउँछु भन्ने कुरा गर्दैमा देश विकास नहुने उनले टिप्पणी गरे ।
‘हिजो ज्ञानेन्द्रलाई अधिकार पुगेन र विकास भएन भनेर अहिले अर्को व्यक्तिलाई अधिकारसम्पन्न गरेर विकास हुन्छ ?’ रिजालले प्रश्न गरे । सांसद रिजालले अहिलेको कर प्रणाली धनी र गरीबका लागि उस्तैै भएकाले प्रगतिशील कर प्रणालीमा जानुपर्ने समय आएकोतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘केनेडीले भनेको चन्द्रमा जाने बाटो बनायौ तर सजिलो भनेर होइन, गाह्रो थियो, असम्भवजस्तो देखिन्थ्यो तर बनायौ भने,’ रिजालले भने, ‘आँखा चिम्लेर पाइपलाइनबाट ग्यास पुर्‍याउँछु भनेर होइन, स्टिमर मात्र होइन ठूला पानीजहाज चलाउँछु भनेर देश विकास हुँदैन ।’ रिजालले रीति–तिथि र संस्कृति भत्काउने गरी विधेयक नल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।